# (၇)ရက် သားသမီးများအတွက် ဇွန်လ ဟောကိန်းများPublished June 1, 2011 | By Dr.Tin Bo Bo	.
Posted in မဟာဘုတ်, မြန်မာ့ရိုးရာ ဗေဒင် | Tagged (၇)ရက် သားသမီးများအတွက် ဟောကိန်းများ, (၇)ရက် ဗေဒင်, ingaweikzar, mahabote, Myanmar Astrology, myanmar zodiac, မြန်မာ့ ရိုးရာ ဗေဒင်, မြန်မာ့ ဗေဒင် | 18 Comments	# အိပ်မက် . . (၁)Published August 7, 2010 | By Dr.Tin Bo Bo	မိတ်ဆွေ ၊ “အိပ်မက်” ဆိုတာကို ဘယ်လို နားလည်ပါသလဲ ? ဘယ်လို ထင်မြင်ယူဆပါသလဲ ? ၊ ယနေ့ ဒီဘာသာရပ် ကလေးကို ကျွန်တော်တို့ ဆွေးနွေး ကြည့်ကြရအောင်။
Posted in ဂမ္ဘီရ | Tagged burmese horoscope, mahabote, Myanmar Astrology, myanmar horoscope, ဂမ္ဘီရ, မဟာဘုတ်, ဖြစ်ရပ်ဆန်းကြယ်, မြန်မာ့ရိုးရာ ဗေဒင်	# သူ့ကို နိုင်လို ဆ, ကိုခို လိုရာဆေးဖေါ်သုံးPublished March 4, 2010 | By dr.tin bo bo	အင်္ဂ၀ိဇ္ဇာဗေဒင်ပညာဟာ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ကုန်းဘောင်ခေတ်ဦးလောက်မှာ စတင်ပေါ်ပေါက်လာခဲ့ပုံ ရပါတယ်။ စတင် တီထွင်သူလို့ အသိအမှတ်ပြု ခံရသူကတော့ တောင်တွင်းကြီးမြို့နေ အတုလ “ခင်ကြီးဖျော်” လို့ အမည်နာမတွင်တဲ့ ဆရာတော် တစ်ပါး ဖြစ်ပါတယ်။ ဆရာတော် အတုလ ခင်ကြီးဖျော်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး “၀ီကီမြန်မာ ဆိုဒ်” ထဲမှာ ဒီလို ရေးသားထား တာကို တွေ့ရပါတယ်။
Posted in မဟာဘုတ် | Tagged burmese horoscope, mahabote, Myanmar Astrology, myanmar horoscope, မဟာဘုတ်, မြန်မာဗေဒင်, မြန်မာ့ ရိုးရာဗေဒင်, မြန်မာ့ ဗေဒင်, မြန်မာ့ရိုးရာ ဗေဒင် |4Comments	# နာမည်တို့၏ အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်များPublished November 10, 2009 | By Dr.Tin Bo Bo	.
Posted in နာမက္ခရဗေဒ | Tagged mahaboke, mahabote, Myanmar Astrology, မြန်မာ့ရိုးရာ ဗေဒင် | 19 Comments	# ဒီလို မိုက်မိုက်ကန်းကန်း ဟောခဲ့ဘူးသည်Published October 12, 2009 | By Dr.Tin Bo Bo	ဒီဆောင်းပါးလေးကတော့ ကျွန်တော့်ဘ၀ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း နဲ့ လူငယ်ဘ၀မှာ ကိုယ့်ကိုယ်ကို အထင်ကြီးမှု၊ မာန်မာနထောင်လွှားမှု၊ ယုံကြည်စိတ်လွန်ကဲမှုတွေ များပြီး မပြောသင့် ၊ မလုပ်သင့် တာတွေ လုပ်မိခဲ့တာကို နောင်တ, ရမိလို့ ရေးလိုက်ရတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဘာလို့ ဒီလို နိဒါန်းချီ နေရသလဲ ဆိုတော့ ဒီဆောင်းပါးကို အမှတ်တမဲ့ ဖတ်ကြည့်ရင် ဒီဆရာ ကြွားလုံးထုတ် ထားတာလို့ ထင်မိမှာ စိုးလို့ပါ။ လုံးဝမဟုတ်ပါဘူး။ လူငယ်ဘ၀ နဲ့ လူကြီးဘ၀ စိတ်ဓာတ် ခံယူမှုခြင်း၊ အတွေး အခေါ်ခြင်း ကွာခြားလာတာကို ဖော်ပြချင်တဲ့ ဆောင်းပါးလေး တစ်ပုဒ်ပါဗျာ။ ဖတ်ကြည့်ပါ။
Posted in မဟာဘုတ်, သင်္ချာဗေဒ | Tagged mahabote, Myanmar Astrology, ပက္ခတ်, သင်္ချာဗေဒ, မြန်မာ့ရိုးရာ ဗေဒင် |7Comments	# အကြွေစောတဲ့ “ပက်ထရစ် ဆွေဇီ”Published September 15, 2009 | By Dr.Tin Bo Bo	ယနေ့ နံနက် သတင်းထဲမှာ ကမ္ဘာကျော် “Ghost” ဇာတ်ကားနဲ့ နာမည်ကျော်ခဲ့တဲ့ မင်းသား “ပက်ထရစ် ဆွေဇီ” တစ်ယောက် ကွယ်လွန် သွားရရှာပါပြီ။ ဒီဇာတ်ကားထဲမှာတော့ သူဟာ မမျှော်လင့်ဘဲ အသတ်ခံ လိုက်ရလို့ “တစ္ဆေဘ၀” ကို ရောက်သွားပြီး“ကောင်းမှု နဲ့ မကောင်းမှု” တို့ရဲ့ အားပြိုင်မှုကို လူသားတွေ သံဝေဂ ရအောင် ရိုက်ကူးသွားလို့ ကမ္ဘာကျော်ခဲ့ရတဲ့ ဇာတ်ကား တစ်ကားပါ။ ပြီးခဲ့တဲ့ ရက်ပိုင်းတွေကဘဲ TV-5 ကနေ “Ghost” ဇာတ်ကား ပြန်လာလို့ ကြည့်လိုက် ရပါသေးတယ်။ အခုတော့ သူ တစ်ကယ် ကွယ်လွန်သွားရ ရှာပါပြီ။
Posted in နာမက္ခရဗေဒ, မဟာဘုတ် | Tagged mahabote, Myanmar Astrology, ပက္ခတ်, မြန်မာ့ရိုးရာ ဗေဒင် | 24 Comments	# (၆)ကြွင်းမဟာဘုတ် ဖွားများ၏ ယေဘူယျ ဝိသေသ လက္ခဏာများPublished July 9, 2009 | By Dr.Tin Bo Bo	ကိုယ့်ရဲ့ မြန်မာသက္ကရာဇ်ကို (၇) နဲ့ စားပြီး ကြွင်းသော ဂဏန်းသည် (၆) ဖြစ်ပါက (၆)ကြွင်းဖွားများဟု သတ်မှတ်ပါသည်။ မြန်မာသက္ကရာဇ် မသိပါက ကိုယ်မွေးတဲ့ ခရစ်နှစ်ထဲမှ (၆၃၈)ဂဏန်းကို နုတ်လိုက်လျှင် မြန်မာသက္ကရာဇ် ရပါသည်။ အကယ်၍ ကိုယ်မွေးရက် မွေးလသည် မြန်မာနှစ်ဆန်း တစ်ရက်နေ့ မတိုင်မှီ ဖြစ်ပါက (၆၃၉) ဂဏန်းကို နုတ်ရပါမယ်။ မြန်မာနှစ်ဆန်း တစ်ရက်နေ့ မှ ဒီဇင်ဘာ (၃၁)အတွင်း မွေးလျှင် (၆၃၈)ဂဏန်းကို နုတ်ရပါမယ်။
Posted in မဟာဘုတ် | Tagged mahaboke, mahabote, Myanmar Astrology, မဟာဘုတ်, မြန်မာ့ရိုးရာ ဗေဒင် | 22 Comments	# အာမက်ဒီနီဂျက်ဘဲ ပြန်နိုင်မှာပါ , သို့သော် ….Published June 12, 2009 | By Dr.Tin Bo Bo	ကနေ့(၁၂)ရက်နေ့မှာ လက်ရှိ သမ္မတ အာမက်ဒီနီဂျက်နဲ့ ပြိုင်ဘက် သမ္မတ လောင်းတို့ဟာ အကြိတ်အနယ် မဲဆွယ်ပြီး မဲပေးပွဲ စတင် နေပြီ ဆိုပါလား။ အီရန် သမ္မတ “အာမက် ဒီနီဂျက် ” ဆိုတာလည်း တကမ္ဘာလုံးက စောင့်ကြည့် ခံရတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်ဘဲ။ ဒါကြောင့် ဒီ ရွေးကောက်ပွဲ လေးကို အီရန်နိုင်ငံ မှာ မဲပေးနေတဲ့ အချိန်မှာဘဲ “မဟာကာလကြီး” ဇာတာနဲ့ ကောက်တွက် ကြည့်လိုက်တော့ အာမက်ဒီနီဂျက်ဘဲ ပြန်နိုင်ဖို့ များတယ်ဗျ။
Posted in နက္ခတ်ဗေဒင်, ဟူးရားဗေဒင် | Tagged mahaboke, mahabote, Myanmar Astrology, မြန်မာ့ရိုးရာ ဗေဒင် | 1 Comment	← Older posts
# လျှပ်တစ်ပြက်ဗေဒင် (60,776)# 2013 ခုနှစ် (၁၂)ရာသီခွင် ဟောကိန်းများ (49,425)# 2012 ခုနှစ် (၁၂)ရာသီခွင် ဟောကိန်းများ (47,204)# မွေးနေ့ဗေဒင် တွက်ကြမယ် (၁) (32,047)# အလွယ်ဆုံး ဗေဒင်မေးနည်း (24,072)# (3)ဂဏန်းသမားများ အကြောင်း တစေ့တစောင်း (15,384)# (4)ဂဏန်းသမားများ အကြောင်း တစေ့တစောင်း (13,208)# (8)ဂဏန်းသမားများ အကြောင်း တစေ့တစောင်း (12,713)# (9)ဂဏန်းသမားများ အကြောင်း တစေ့တစောင်း (11,753)# ဧပြီလ အတွက် (၇)ရက် သားသမီးဗေဒင် (10,408)# ဧပြီလ (၇)ရက်သားသမီး ဗေဒင် (10,356)# နာမည်သည် နောက်ဆုံးအဖြေလော? (10,216)# မဟာဘုတ် စစ်တမ်း (10,164)# ဒီဇင်ဘာလ(၇)ရက်သားသမီးဗေဒင် (10,134)# နဂါးနှစ် လာပြီ (9,456)# ၁၂ ရာသီခွင် နှင့် လူသားများ (၂) (9,414)# မွေးနေ့ဗေဒင်တွက်ကြမယ် (၂) (9,090)# သြဂုတ်လအတွက် သင်္ချာဗေဒ ဟောကိန်းများ (8,908)# (1)ဂဏန်းသမားများ အကြောင်း တစေ့တစောင်း (8,763)# အပြောင်းအလဲ များတတ်တဲ့သူ (8,756)# အောက်တိုဘာလ အတွက် (၇)ရက် သားသမီး ဟောကိန်းများ (8,292)# အောက်တိုဘာလ (၇)ရက် သားသမီးဗေဒင် (7,896)# မေလအတွက် (၇)ရက်သားသမီး ဗေဒင် (7,788)# နိုဝင်ဘာလ(၇)ရက်သားသမီးဗေဒင် (7,744)# မတ်လ (၇)ရက် သားသမီး ဗေဒင် (7,614)# (၀)ကြွင်း မဟာဘုတ် ဖွား များ၏ ယေဘူယျဝိသေသ လက္ခဏာများ (7,568)# စက်တင်ဘာလ အတွက် (၇)ရက် သားသမီး ဟောကိန်းများ (7,354)# မြန်မာသက္ကရာဇ် (၁၃၇၅)ခုနှစ် (၇)ရက်သားသမီး ဟောကိန်းများ (7,183)# မွေးနေ့ မွေးရက် ထပ်တူကျခဲ့လျှင် . . . (7,162)# ၁၂ ရာသီခွင် နှင့် လူသားများ (၁) (7,064)	အားပေးတယ်ဆို Like လုပ်ခဲ့နော် !